मैनारी खोलामा बन्यो पुल, स्थानीयमा ल्यायो खुसी – कामना डेली
On २०७७ श्रावण १६, शुक्रबार १७:५९ Last updated Jul 31, 2020
माधव बेल्बासे, चन्द्रौटा । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको विकट क्षेत्रको रुपमा रहेको मैनार गाउँमा रहेको मैनारी खोलामा पुल निर्माण भएको छ । संघिय सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा झोलुङ्गे ट्रस निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत रु ३८ लाख ७९ हजार ८ सय रुपैया लागतमा उक्त ट्रस(पूल) निर्माण भएको वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले बताउनुभयो ।
शुक्रवार पुल उद्धघाट गर्दै मैनारी खोलामा पुल नहुँदा बर्षायाममा आवतजावत गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले अब सहज हुने अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो । “पहिलो पटक निर्माण गरेको पुल सफल हुन सकेन,यस वर्ष सफल भएका छौ” अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो “स्थानियहरुको सहयोगले पुल निर्माण सफल भएको हो,।”मैनारखोलामा गत वर्ष पुल निर्माण भएको र यस वर्ष चन्द्रौटा देखि मैनार गाउँ सम्मको सडक स्तरउन्नती गरिने सापकोटाले बताउनुभयो । थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको मैनार,बुलकिया गाउँमा थारु होमस्टे संचालन गर्ने सकेमा पर्यटनको विकास हुने उहाँले बताउनुभयो । पुलको उद्घाटन गर्दै शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले पुल निर्माण पछि वडा नं. ३ अन्तर्गत मैनार र बुलाकीका गाउँका ३ सय बढि घर परिवार लाभान्वित भएको बताउनुभयो । पुल नहुदाँ विरामी र सुत्केरीलाई समयमा अस्पताल पु¥याउन समस्या रहेकोले अब त्यो समस्याको समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँवासीलाई वडा कार्यालयमा समेत जान समस्या रहेको बताउदै पुल निर्माण पछि आवतजावतमा सजिलो हुने उपप्रमख चौधरीले बताउनुभयो ।
पुरुषको बेवारिसे शब फेला
इमेल: kaman[email protected]